avril 2016 – filazantsaramada
Ezaka fisoratam-panambadiana Anisan’ireo Fitandremana nandray anjara tamin’ny Fampiofanana “Fampitaovana ny olona masina” nokarakarain’ny Feon’ny Filazantsara (FF) ny volana Novambra 2016 ny FJKM Ankadivoribe Famonjena. Fanampim-piofanana ankoatr’ izay efa omen’ny Fiangonana ireo Kristiana, mikendry indrindra izay hampahomby bebe kokoa hatrany ny Fitoriana ataon’ny Fiangonana amin’ny alalan’ny Tafika Masina izany. Koa ny volana Martsa 2016 teo àry, […]
Publié parfilazantsaramada avril 28, 2016 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur FJKM Ankadivoribe Famonjena (SPAA 11)
Publié parfilazantsaramada avril 22, 2016 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur FAHORIANA, FIFALIANA.
« Izaho no mpiandry tsara. » Jaona 10:11 Jesosy eto dia manambara tena ho mpiandry tsara. Raha amin’ny maha-olombelona antsika dia mampisalasala tokoa ny manambara tena, raha tsy hoe angaha, olona efa mpirehareha ka tsy manampahendrena. Ny Soratra Masina aza dia milaza fa raha mikasa hanao zavatra dia tokony ho lazaina: raha sitrapon’Andriamanitra. Fa eto kosa Jesosy […]
Publié parfilazantsaramada avril 15, 2016 avril 14, 2016 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur MPIANDRY ONDRY.
Tsara ny Tompo Tiana ny mampahatsiahy fa ny volana Martsa dia nisy fanentanana nataon’ny Feon’ny Filazantsara (FF) tany amin’ny FJKM Ambohibary Zoara (SPAA 11) mikasika ny Fampianarana Soratra Masina Ifandraisana izay atolotry ny FF maimaimpoana ho an’ny Fiangonana. Isaorana ny Tompo fa dia nahatratra 65 ireo namaly ny antso ka niroso hianatra ny Tenin’Andriamanitra. Atoa […]
Publié parfilazantsaramada avril 13, 2016 avril 13, 2016 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur Fandefasana horonan-tsarimihetsika
LASA SAHADY NY PASKA. Tsy lasa sahady ka!
« Fa na oviana na oviana hianareo no mihinana itony mofo itony sy misotro amin’ny kapoaka, dia manambara ny fahafatesan’ny Tompo hianareo mandra-pihaviny. » I Korintiana 11:26 Fa Kristy raha novonoina, dia voalaza fa Paska ho antsika. Ary isaky ny mandray ny fanasan’ny Tompo isika dia mahatsiaro Azy: izao no ataovy ho fahatsiarovana Ahy. Isaky ny mihinana […]
Publié parfilazantsaramada avril 8, 2016 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur LASA SAHADY NY PASKA. Tsy lasa sahady ka!
« Esory ny masirasira ela, mba ho vongana vaovao hianareo, araka izay tsy maha-misy masirasira anareo. Fa voavono Kristy Paska ho antsika; » I Kor 5:7 Ny fomba fanaon’ny jiosy rehefa hankalaza ny Paska dia ariana ireo sira (lalivay) taloha rehetra, ary dia tena nokarohina mafy tokoa izay sira taloha hanariana azy, ka mampiasa jiro mihitsy hikarohana […]
Publié parfilazantsaramada avril 4, 2016 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur MASIRASIRA FAHARATSIANA.
Fifaninanana Soratra Masina Efa mihoatra ny fito taona izao ny fiaraha-miasa mahomby teo amin’ny Feon’ny Filazantsara (FF) sy ny Lycée Nanisana. Amin’ny alalan’ireo “Media” na fitaovam-pifandraisana moa no entin’ny FF mitory ny Filazantsara ho an’ireo mpianatra. Anisan’ireny ny Fampianarana Soratra Masina Ifandraisana (FSMI) na “Cours Biblique par Correspondance” izay hianarany ny Tenin’Andriamanitra, sy ireo bokikely […]
Publié parfilazantsaramada avril 1, 2016 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur Fandaharana ho an’ny tanora